Tag: socodka socodka content | Martech Zone
Tag: habka socodka socodka
Haddii aad ka shaqeyneyso shirkad shirkadeed, qorsheynta waxyaabaha la fulinayo iyo fulinta waxay udub dhexaad u yihiin istiraatiijiyaddaada suuq-geynta guud. Caqabada ayaa ah maaraynta fikradaha, ilaha, shaqooyinka, iyo dib u eegista guud ahaan wax soo saarka. Barxada 'DivvyHQ' waxay siisaa dhamaan aaladaha lagama maarmaanka u ah fikirka ilaa fulinta. Barxada waxaa loogu talagalay labada nuxur iyo daabacaadda baraha bulshada. DivvyHQ waa daruur ku saleysan, qorshaynta nuxurka iyo qalabka shaqada wax soo saarka ee loo dhisay si ay uga caawiso suuqleyda iyo soo saareyaasha wax soo saarku inay helaan / joogaan abaabul isla markaana si guul leh u fuliyaan dalabyada